Internet Ministries - CB Akakanganwa Login
CB Yakanganwa Login
Vakarasikirwa Nomutauro wako kana Password yako?
Kana iwe rakarashira zita rako rekushandisa, tapota nyora yako E-mail Address, uye chengetedza Bhokisi rekutumira Username, uye zita rako rekushandisa richatumirwa kukero yako ye email.
Kana iwe wakanganwa zvose zita rako rekushandisa uye password yako, ndapota chengetedza username kutanga, ipapo password. Kuti uwane zita rako rekushandisa, ndapota uise E-mail yako Kero, uchisiya Username munda usina chinhu, ipapo chengetedza Bhokisi rekutumira Sendername, uye zita rako rekushandisa richatumirwa ku email yako kero. Kubva ipapo unogona kushandisa fomu imwechete kuti uwanezve password yako.
Kana iwe rakarashika password yako asi ziva zita rako rekushandisa, ndapota tumira zita rako rekushandisa neIndaneti yako yeIndaneti, shandisai Bhokisi reKutumira Password, uye iwe uchagamuchira password itsva nguva pfupi. Shandisa iyi itsva password kuti uwane peji.